IViana Rooftop House - iflethi ekwindawo entle - I-Airbnb
IViana Rooftop House - iflethi ekwindawo entle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGereviana
I-Viana Rooftop yiflethi okanye indlu ekwicomplex esembindini weViana do Castelo. Ngaphezulu kwesakhiwo esinezinto eziphawulekayo kwiziko lembali, nesinxibe eluphahleni lwendlu ephakathi yesi sixeko ejongene nolwandle nomlambo. Ukuba lula, ukuthi zava nokuhoya izinto ezincinci, ukuze ube nexesha elimnandi kubantu ababini, kwintsapho okanye phakathi kwabahlobo.
Inegumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini, amagumbi okuhlambela amabini, igumbi lokuhlala nekhitshi elinento yonke, iTV ne-wifi. Kukho nesofa ekwayibhedi kwigumbi lokuhlala.
Ndwendwela iLima uze uhlale kule flethi intle!
Isondele kakhulu kwiivenkile zokutyela ezintle, iivenkile ezithengisa izinto ezibhakiweyo neevenkile ezinkulu, ibekwe kakuhle ukuze ube neholide ethe cwaka.
Ime kwiikhilomitha eziyi-2 ukusuka elunxwemeni, apho unokuziqhelanisa nemidlalo yamanzi okanye wonwabele uhambo oluhle ngaselunxwemeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Gereviana
Siza kuhlala silahlekile ukuba unemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo ngexesha lokuhlala kwakho!
Inombolo yomthetho: 98605/AL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Viana do Castelo